Abahlanza i-China Cordless Vutaum Cleaners, abahlanza i-Handheld Vutaum, abahlanza i-Mini Vacuum, abakhiqizi beMini Fans kanye noMhlinzeki
SHENZHEN HONK ELECTRONIC CO., LTD [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , Oceania , West Europe Ngaphandle:81% - 90% Izikweletu:ISO9001, CE, EMC, FCC, REACH, RoHS Incazelo:Umkhiqizi / umhlinzeki we-I-Cordless Vacuum Cleaners, anikela nge-Abahlanza Izindwangu Zokuhlanza Eziphathwayo,Abahlanza abasebenza kancane, njll.
IShenzhen HONK Electronics Co, Ltd yasungulwa ngonyaka ka-2000, yanikezelwa ekuthuthukisweni, ekwakhiweni, ekhiqizweni kwabathandi be-USB, abahlanza bezindlu, abahlisi bezindlu, amalambu edeski we-LED nama-motor-motors. Le fektri ihlanganisa indawo enamamitha-skwele angaphezu kuka-3000, umnyango we-R & D, umnyango wokubumba, umnyango wokujova, umnyango wama-wire, umnyango womhlangano neminye imihlangano yokucobelelana ngolwazi. Singanikeza ngezinsizakalo zobuchwepheshe bokuklama ukubukeka nokwakheka kwesakhiwo ukwanelisa amakhasimende. wamukela i-oda lekhasimende le-ODM / OEM ngezidingo ezihlukile. Imikhiqizo yabalandeli isetshenziswa kabanzi emikhiqizweni ehlukene, efana nehhovisi, umndeni, ngaphandle, izisebenzi, amathuluzi nokunye, futhi iningi lemikhiqizo lithola amalungelo obunikazi ezweni lonke. Selokhu yasungulwa, inkampani ibilokhu inamathela kumqondo webhizinisi "wokulwela ukwenza kahle futhi ulwela ukwenza kahle". Sakhe "ukugxila kumakethe, ikhwalithi njengezinhloso eziyisisekelo, ezintsha kanye nentuthuko". Sicwaningwe futhi sakha imikhiqizo emisha kanye namazwe amaningi owaziwayo womkhiqizo njengaseJapan, Germany.Korea nakwamanye amazwe. Futhi Sisungula ubudlelwano obude obude nabo, sifinyelele esimweni sokuwina.
Isicoci se-vacuum esingenazintambo esisebenza ngesandla sekhaphethi kanye ne-desktop
Ishiphu esisebenzayo esingenazintambo esisebenzisekayo esingenakusheka esitholakala kalula Le ndawo yokuhlanza i-vacuum yemoto ingasetshenziselwa ukuhlanza ukungcola okufihliwe kwekhibhodi yokubhalela, iphrinta, ukudla kwezilwane, ihhovisi, itafula lasekhishini, noma ezinye izinto zasendlini. Wireless ephathekayo...
Izicucu eziphathwayo zokuphatha eziphathwayo eziphathwe nebhethri le-lithium lezimoto
Ishiphu esisebenzayo esingenazintambo esisebenzisekayo esingenakusheka esitholakala kalula Le ndawo yokuhlanza i-vacuum yemoto ingasetshenziselwa ukuhlanza ukungcola okufihliwe kwekhibhodi yokubhalela, iphrinta, ukudla kwezilwane, ihhovisi, itafula lasekhishini, noma ezinye izinto zasendlini. Isicoci se-vacuum...
izimboni zokuhlanza izimbambo ezingenazintambo ezimboni
Ikheli:5F,Blck 4,Jinfo Industrial Area,He Zhou,BaoAn District, Shenzhen, Guangdong
Copyright © 2020 SHENZHEN HONK ELECTRONIC CO., LTD Wonke amalungelo agodliwe. Inikezwe amandla yi
Umkhiqizi / umhlinzeki we-I-Cordless Vacuum Cleaners
, anikela nge-Abahlanza Izindwangu Zokuhlanza Eziphathwayo,Abahlanza abasebenza kancane, njll.